Faayilii - Lixa Oromiyaa
Godina wallaggaa bahaa aanaa kiramuu gandeen Haroo Addis Aleem, Shakkee guddinaa fi Lalistuu Somboo jedhamu keessa xumura torban darbee humnoonni hidhatan haleellaa raawwataniin manneen jireenyaa gubachuu fi lubbuun namaa baduu jiraattonni ganda Haroo dubbatanii jiran. Jiraattonni kun yeroo ammaa ganda keenya irraa baqannee magaalaa Kiramuu jirra jedhu namni Oromoo Fayisaa jedhaman.
Jiraataa Ka biroo obbo Mullataa Wakjiraa jedhamanis haaleellaa sana jalaa dheessinee yeroo ammaa magaalaa Kiramuu keessa jirra jedhu.
Miseensotoa maatii kootii nama sagaltu na duaa ajjeefame kan naan jedhan immoo Yunaayitid Isteetis kutaa Pensalvaaniyaa magaalaa Laankaaster keessa jiraatan aadde Badhaadhee Qana’ii, gadda guddaatu maatii koo irra ga’e jedhan.
Hoogganaan Biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin, walitti bu’iinsi sun kan jalqabame ennaa gareen ABO Shanee jiraattota ajjeesetti jedhanii, finxaaleyyiin Amaaraa bosona jiran illee namoota ajjeesanniiru jedhan.
Ejensiin “Standard and Poor” Jedhamu Itiyoophiyaa Akka Biyya Liqii Baasuu Dadhabdeetti Gabaasuun Ilaachisee Yaada Hayyootaa
Dubartoonni Paarkii Inxooxxoo Keessatti Carraan Hojii Kennameef Galiin Argannu Gahaa Miti, Jedhu
Prezidaant Baaydiin Rakkoo Dhiyeessii Amerikaa Mudatee Irratti Dubbachuuf Jiru